मैले जनयुद्धमा मान्छे मारेकै छैन : डा. बाबुराम भट्टराई — Imandarmedia.com
मैले जनयुद्धमा मान्छे मारेकै छैन : डा. बाबुराम भट्टराई
तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संबिधानसभाबाट संबिधान जारी भएपछि गणतन्त्रको संविधान जारी भयो । संविधान जारी पश्चात अब अहिलेसम्म आफुहरु आएको यो बाटोबाट धेरै आगाडी बढ्न नसकिने भन्दै पार्टीबाट राजीनामा दिएर हिडेका थिए ।
त्यस लगतै अबको नेपाललाई आवश्क पार्टी भनेको विकासको एजेण्ड बोक्ने पार्टी नै अहिलेको अपरिहार्य पार्टी रहेको भन्दै उनले नयाँ शक्ति नामको पार्टी निर्माण गरेका थिए। नयाँ पार्टी निर्माण गरेर चुनावमा भाग लिएका भट्टराईको पार्टीले सर्बनाक हार बेहोरेको थियो ।
उनले तत्कालिन बेला भनेका थिए- ‘हाम्रो एजेन्डा भनेको छोटो अवधिमै गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने र तेस्रो स्तरमा भासिएको देशलाई मध्यम स्तर हुँदै उच्च स्तरमा पु¥याउने हो । विकास र समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस तथा छलफल हुनु आवश्यक छ ।’
बिकाश र शान्तिको एजेन्डा लिएर चुनावमा भाग लिएका भट्टराईले एक अन्तरर्वाताको क्रममा दस बर्षे जनयुद्धको समयमा आफुले कुनैपनि मानिसको हत्या नगरेको र कुनैपनि मानिसको हत्या भएको हेर्न समेत नसक्ने बताएका छन् । त्यसैले अबको युग भनेको हत्या र हिँसाको युग नभई विकास र समृद्धिको युग भएको बताएका छन् ।
उनि भन्छन्- ‘विकास र समृद्धिका अवधारणाहरू फरक–फरक छन् । हाम्रो देशको सापेक्षतामा त्यसका लागि लागू हुने नीति र बाटो पनि फरक हुन्छन् । नियन्त्रित समाजवाद अर्थात साम्यवाद हो ।’
उनले सबैथोक राज्यले नियन्त्रण गरेर राज्यकै योजनाअनुसार मात्र विकास हुन्छ र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणालाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताएका छन् ।